I-Frog Lodge-Yonwabela Ubunewunewu kunye nesimbo e-Otematata - I-Airbnb
I-Frog Lodge-Yonwabela Ubunewunewu kunye nesimbo e-Otematata
I-Frog Lodge yindawo yokuhlala ephangaleleyo, yale mihla ebekwe kumazantsi eLake Benmore kwidolophu enqabileyo, ezolileyo yaseOtematata; Iiyure ze-1 1/2 empuma ye-Mt Cook & 1 iiyure zokuqhuba ngasentshonalanga kwidolophu engaselunxwemeni ye-Oamaru & i-steampunk capital yase-NZ.
Iindwendwe zingonwabela ukuzola, ukuphumla kunye nokuphumla, kunye nokufikelela kwimisebenzi yangaphandle engenamkhawulo. Ukuloba okukumgangatho wehlabathi, ukukhwela isikhephe, ukuzingela, ukusefa umoya, ukutyibilika emanzini kunye nokuhamba ngesikhephe, iAlps 2 umjikelo woLwandlekazi, ukunyathela kunye namabala okutyibiliza alungile emnyango wakho.
Nje ukuba ungene kwiFrog Lodge uya kuziva ukwiholide kwangoko. Isicwangciso esivulekileyo, esiyilwe yindlu eyi-130 square metre indlu enesilingi eziphakamileyo ukuhlalisa indawo ephezulu ejonge kwigumbi lokuphumla kunye neendawo zokutyela kunye neembono zeenduli ezijikelezileyo kunye neentaba. Iindwendwe zingonwabela amagumbi okulala amathathu amakhulu, amagumbi okuhlambela amabini, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-Wifi entsha. I-Lodge ihonjiswe ngezitayile ze-retro kunye ne-mid century. Phumla phambi komlilo okanye kwindawo epholileyo yokufunda iincwadi kwaye umamele iiCD zesikolo esidala kunye neerekhodi. Ifanelekile kwindawo yokumisa ubusuku bonke ukusuka eChristchurch ukuya eQueenstown okanye ubhukishe ubusuku obumbalwa ukuze uphumle ngokupheleleyo kwaye wonwabele ubuhle kunye nokuzola kwendawo.
4.89 · Izimvo eziyi-135
I-Otematata yindawo ezolileyo, ekhuselekileyo. Kukho ivenkile enkulu, ikhefi kunye ne-pub/restaurant edolophini ukuze kube lula kuwe.
I live in Kakanui, a small coastal community in the South Island of NZ
I work at Steampunk HQ, a quirky unique museum of futuristic art, located in Oamaru.
I love to travel, usually in pursuit of fun mountain biking trails.
Sihlala eKakanui, iyure esempuma ye-Otematata kwaye ngokudabukisayo asiyi kufumaneka ukuba samkele iindwendwe zethu. Siya kunika imiyalelo epheleleyo nge-imeyile. Kuya kubakho uluhlu lwemiyalelo kwiLodge ngokunjalo kwaye sifumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile nangaliphi na ixesha.
Sihlala eKakanui, iyure esempuma ye-Otematata kwaye ngokudabukisayo asiyi kufumaneka ukuba samkele iindwendwe zethu. Siya kunika imiyalelo epheleleyo nge-imeyile. Kuya kubakho uluh…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Otematata